यो जोडीको प्रेमले संसार हल्लायो, आखिर के गरे त्यस्तो ? « Etajakhabar
यो जोडीको प्रेमले संसार हल्लायो, आखिर के गरे त्यस्तो ?
प्रकाशित मिति : २८ श्रावण २०७६, मंगलवार ०८:०३
काठमाडाैं : आधुनिक समाजमा सम्बन्धहरु जसरी पातलिँदै छन्, उत्तिकै अनौठा सम्बन्ध स्थापित पनि हुँदै गरेका छन् । हालै ६९ वर्षीय एक बेलायती वृद्ध र २४ वर्षीया युवतीबीच भएको विवाहले यस्तै अनौठो प्रेम सम्बन्ध खुलासा गरेको छ ।४५ वर्ष अन्तरमा रहेका उनीहरुको प्रेम सम्बन्ध पनि उत्तिकै रोचक छ । एक वर्षको छोरो समेत जन्माइसकेका उनीहरुले ४ वर्षको प्रेम सम्बन्धपछि हालै विवाह गरेका हुन् ।
२४ वर्षीया स्टेफनी र ६९ वर्षीय डन वाल्परले आफ्नो रोचक सम्बन्धबारे बारक्रफ्ट टिभीसँग हालै एक अन्तरवार्तामा खुलेर चर्चा गरेका छन् । डन यसअघि नै विवाहित थिए । अघिल्लो विवाह टुटेपछि स्टेफनीसँग अर्को विवाह गरेका हुन् । उनले अन्तरवार्तामै आफ्नो अघिल्लो विवाह र सम्बन्धबारे खुलेर बोलेका छन् ।‘मैले डनको छोरालाई स्कुलको बेलादेखि नै चिनिसकेको थिएँ । हामी सँगै पढ्न गएका थियौँ । पूरा स्कुले जीवन हामीले सँगै बितायौँ ।’ रोचक त के भने डनको पहिलेकी श्रीमतीतर्फका छोरासँग स्टेफनीले ग्राजुएटसम्म सँगै पढेकी थिइन् । उनले आफूहरुको सम्बन्ध बलियो रहेको पनि खुलासा गरेकी छन् ।
अचेल डन र स्टेफनी डनका छोराको बारेमा कुरा गर्दैनन् । एक वर्षअघि मात्रै उनीहरुले छोरा जन्माए । उनको नाम हो लाचलाह । लाचलाह जन्मिएपछि मात्रै उनीहरुले विवाह थरेका हुन् ।‘अधिकांश मानिसलाई थाहा छैन कि, उमेरान्तरका विवाह पनि परिपक्व हुन सक्छन् भनेर,’ स्टेफनी भन्छिन् । उनी यसरी उमेर भिन्नताबीच पनि सम्बन्ध बलियो हुनसक्नेमा विश्वास गर्छिन् । र प्रेम स्वभाविक हुनसक्ने बताउँछिन् ।